Allison Green Soro M Mma 12 Week Program on Sale for $ 47 - Fitness Rebs
Home » Ibu » Allison Green Soro M Mma 12 Week Program on Sale for $ 47
Allison Green si na TV egosi Bad Girls Club eweputara usoro mmemme ọ bụla a na-akpọ Soro M Mma. Maka obere oge naanị ịnwere ike ịnweta Allison Green nke ọhụrụ Gbasara m ngwa ngwa nke 12 maka ire ere naanị $ 47
Soro M Mma bụ usoro ihe mmemme 90 zuru ezu nke na-agbada n'ime 3 dị iche. Oge ọ bụla nke ihe omume ahụ ga-emecha maka izu 4. Ihe mbụ 2 nke Follow Me Fitness na-agụnye oge 3 kwa izu ka oge ikpeazụ nke usoro ihe omume a bụ 4 ụbọchị n'izu, na-arụ ọrụ ọ bụla dịka 1 hour. Na mgbakwunye na mgbatị ahụ, Follow Me Fitness na-agụnye usoro mmemme nwere ike iji mee ụbọchị ezumike.
Pịa ebe a ịmatakwu banyere onyinye a na-esote m
January 12, 2018 Akwụsị Ibu 1 Comment
One chere na "Allison Green Soro M Mma 12 Week Program on Sale for $ 47"
Pingback: Soro M Mma site Allison Green on Sale Ugbu a! - Ihe niile banyere ntụrụndụ